Addunyaa fi Vaayrasii Koroonaa
Adoolessa 13, 2020
Hindiin sa'atii 24 keessatti namootavaayrasii koronaan qabaman 28,701 galmeesitee jirti.Kunis Yunaaytid Isteetes fi Braaziliin kan guyyaa tokkotti galmeessan caalee jira.
Meksiskoon namoota dhukkuba Koviid-19 qabamanii du'an hedduu qabaachuun Xaaliyaanii caaltee sadarkaa duraa qabattee jirti.
Yunaaytis Isteetes keessatti lakkoobsii namoota vaayrasii koronaan qabamanii akkaan dabalaa yeroo jiru kanatti manni barnootaa banamuu qaba jechuun ministrittiin ministeera Barnootaa Beetsii Devoos dubbatanii jiru.
Gama kaaniin bulchiinsii prezidaant Traamp barattoota biyyootii addunyaa adda addaa irraa dhufuun Amerikaa keessatti barataa turan yoo daree keessatti argamuun waan baratan hin qabaatiin gara Amerikaatti deebi'uu hin qaban jedhee jira.
Kana mormuudhaan Yunivarsitiin Harvard fi Instituutiin Teknoolojii kan Maasaachuuseet Robii darbee himata mana murtii Federaalaa isa Bostan jiruutti galfatan yunivarsitiwwan kanneen biroon 60ni deggeranii jiru.
Oromoon Amerikaa fi Awurooppa ijjeechaa Hacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu bulchoota siyaasaa Oromoof hiriira mormiitti jiran
Amalli Dullachii Mootumman Itoophiyaa Presii Walabaa Irratti Qabu Ammallee Isa Hin Gadhiisne: CPJ
Loltoota Humnoota Wal Taatotaa NATO Afgaanistaan keessaa 28 COVID-19n Qabaman
Siiriyaa Idilib Keessatti Yeroo Jalqabaaf Vaayiresiin Koronaa Argame
Miseensoni Koree Giddu Galeessa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay To’annaa Jala Ooluutu Gabaasame